tcelections – KZNCOGTA
Voter Registration 19 January 2020
Ukhetho Lwemikhandlu Yamakhosi Selufikile KwaZulu-Natal
Izakhamuzi ezihlala ezindaweni ezingaphansi kwaMakhosi yaKwaZulu-Natal ziyakhuthazwa ukuba zibambe iqhaza ekukhethweni kwamalungu emikhandlu yezizwe zamakhosi, oluzoba ngoMgqibelo mhlaka 29 February kulonyaka ka 2020.
Imikhandlu yamakhosi iyizakhiwo ezisebenzisana nohulumeni ukuletha intuthuko kwizindawo ezingaphansi kwamakhosi. Kubalulekile ukuba imiphakathi eyakhele izizwe zamakhosi ukuba idlale indima ekubunjweni kwalemikhandlu.
Ngomhlaka 19 Januwari, kuzobe kubhaliselwa ukuvota kulolukhetho, kuzo zonke iziteshi zokuvota ezindaweni zamaKhosi ezihlale zivulwa kuzo zonke izinketho. Umuntu obebhalisele ukhetho lukaMay lukazwelonke asikho isidingo sokubuye abhalise kabusha ngaphandle uma efuna ukushintsha isiteshi sokuvota aye kwesinye ngaphakathi kwesizwe esisodwa.
Ukhethwa kwezi-Phakanyiswa 01 February 2020 09H00 –
Ukwethulwa kwamagama alabo abakhethwe yiNkosi ukuba bakhe isibalo esingu 60% samalungu omkhandlui.
Amalungu omphakathi azophakamisa amagama alabo abazovotelwa ukwenza isibalo esingu 40% kumkhandlu. 09 February 2020 09H00 –
Umbuzo: Kungani isifundazwe saKwaZulu-Natali sibamba ukhetho lwemikhandlu yamakhosi kulonyaka?
Impendulo: KwisiFundazwe saKwaZulu-Natal umthetho weKwazulu-Natal Traditional Leadership and Governance Act, 2005, nomthetho kaZwelonke ongamele izindaba zobuKhosi ugunyaza ukuthi yonke imikhandlu yamakhosi ibunjwe kabusha (okuhlanganisa no40% okhethwa ngumphakathi ngokwentando yeningi) njalo ngemuva kweminyaka emihlanu. Lokhu kuqonde khona ukuthi njalo imikhandlu yamakhosi kumele ikhethwe eminyakeni emihlanu.
Umbuzo: Ngokomthetho mangaki amalunga ekufanele ukuthi ahlale emkhandlwini weNkosi?
Impendulo: Isibalo samalunga omkhandlu wenkosi sihamba ngokulawulwa kweformula eyakhishwa uNgqongqoshe kazwelonke ehambisana nobukhulu besizwe ngokwanani ezigodi esizwe ngesizwe.
Uma isizwe sinezigodi ezincane isibalo samalunga siba yishumi nesishiyagalombilI (18), nakanjalo uma isibalo sezigodi ziziningi esizweni, umthetho uvumela ukuthi umkhandlu ube namalungu angadluli kumashumi amahlanu (50). Kukhona indlela yezibalo (formula) esetshenziswayo ukubala amalungu umkhandlu nomkhandlu ovunyelwe ukuba ube nawo. Lesi sibalo siqhathanisa isibalo sabantu noma isibalo sezigodi.
Sibalulwa uNdunankulu wesiFundazwe (uMhlonishwa uSihle Zikalala), esusela kwisilinganiso esihlonzwe uNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, esiGazethiwe futhi esisuselwe ebuningini balowomphakathi noma esibalweni sezigodi.
Umbuzo: Inkosi igunyazwe ukuthi ikhethe Amalunga amangaki?
Impendulo: Ngokomthetho amalungu omphakathi yiwo ekumele azikhethele amalungu omkhandlu angu 40% azohlala kumkhandlu weNkosi abangaphansi kwawo.
Umbuzo: Ngabe amalungu aqokwe yiNkosi nalawo akhethwe ngumphakathi ayalingana yini ngokwezinga emkhandlini?
Impendulo : Umuntu uma nje esesemkhandlwini akusho lutho ukuthi wakhethwa ngumphakathi noma wafakwa yinkosi, bayalingana futhi imisebenzi yabo bonke iyafana.
Umbuzo: Ngabe iyiphi inhlangano ezimele ezosingatha lolukhetho?
Impendulo: Lolukhetho luzosingathwa yikhomishana ezimele eyangamela ukhetho ezweni lonke phecelezi i-Independent Electoral Commission (IEC). Lokhu kuqonde ukuthi uhlu lwamagama abavoti, oluzosetshenziswa luyafana lalolu olwasetshenziswa ngokhetho lukazwelonke kanye nezifunda, lwangonyaka owedlule. Lokhu futhi kwenza ukuthi luhlonipheke ukhetho futhi lwenziwe ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.
Umbuzo: Ngabe lunini ukhetho lwemikhandlu yamakhosi?
Impendulo: Ukhetho lwemikhandlu yamakhosi luzoba ngoMgqibelo Mhlaka 29 Februwari kuwona lonyaka ka 2020 kuzo zonke izizwe zamakhosi. Ukuze ukwazi ukuvota kumele uvakashele isiteshi sokuvota, ngesonto mhlaka 19 January uyobhalisa noma uyoshintsha isiteshi sokuvota, noma uvakashele amahhovisi ekhomishana engamele ezokhetho, i-IEC ngaphambi komhlaka 24 Januwari.
Umbuzo: Ngabe imiphi imiphakathi ekulindeleke ukuthi ivote kulolukhetho?
Impendulo: Imiphakathi ehlala ezindaweni ezingaphansi kobukhosi bendabuko, iyona kuphela ezobe ibambe iqhaza kulolukhetho. Uhlu lwezizwe Kanye neziteshi ezivuliwe isizwe nesizwe kuyophuma emaphepheni esiZulu Isolezwe langomhlaka 16 January 2020 noma uvakashele iwebsite ethi www.kzncogta.gov.za/tcelections
Umbuzo: Ngabe ubani olungele novumeleke ukuvota?
Impendulo: Ukuze uvote kulolukhetho kumele ube:
Isakhamuzi sase Ningizumu Afrika
Isakhamuzi esizweni seNkosi ethintekayo
Neminyaka engu 18 nangaphezulu
nomazisi waseNingizimu Afrika
Umbuzo: Ngabe yimiphi imigomo ekumele ilandelwe yilabo abafisa ukungenela ukhetho ukuze babe ngamalunga omkhandlu?
Impendulo: Kumele ube:
Isakhamuzi esihlala esizweni seNkosi ethintekayo
ngongakaze alahlwe yicala bese egwetshwa izinyanga ezingaphezu kweziyishumi nambili, unganikezwanga ithuba lokuthi ukhokhe inhlawulo.
UMbuzo : uma ngihlala elokishini ngingahamba yini ngiyovota ekhaya la engisuka khona?
Impendulo : uma ubhalisele ukuvota endaweni yangakini, noma ngabe uhlala elokishini ungabuyela ekhaya uyovota kulolukhetho uma nje kuyikuthi leso yisizwe sala wazalelwa khona noma la owakhe khona.
uMbuzo: Kuyaholelwa yini ukuba yilunga lomkhandlu wesizwe seNkosi?
Impendulo: Ukuba yilungu lomkhandlu wesizwe akuholelwa njengamanje, kepha sikhona isibonelelo esincane sokubhekelela ukuthi amalungu agibele uma eza emihlanganweni yonkhandlu emine ngonyaka.